पनि अलिकति मा विज्ञान रुचि जो हरेक व्यक्ति, प्रकृति को सबै विकास र प्रगतिमा आधारित छ थाह छ। विशेष, सबै भन्दा जटिल जीव गर्न सरल सेल देखि यसको विकास मार्गमा हामीलाई प्रत्येक। यो बुझेर, पर्याप्त शुद्धता संग को प्रश्नको जवाफ सक्नुहुन्छ तपाईं के ontogeny। अवधारणा अक्सर छद्म-वैज्ञानिक साहित्य मा पाइन्छ, तर सबैले अवधि को परिभाषा थाह छ।
हामी यो समस्या स्पष्ट गर्न प्रयास गर्नेछ, सरल शब्दहरू भन्दा बढी यो महत्त्वपूर्ण अवधारणा कुरा। त्यसैले, हामी वैज्ञानिक व्याख्या कुरा भने कि ontogeny सबै गुणस्तरीय मृत्यु जन्म देखि शरीर मा परिवर्तन को एक अनुक्रम छ।
तर एक सरल बयान मा ontogeny के हो? बस राख्नु, यो सबै परिवर्तन को totality छ: जीव रसायन morphological, शारीरिक र पनि मनोवैज्ञानिक, कि मानिस आफ्नो जीवनकालमा एक प्रजाति undergoes। यसरी, ontogeny यो अपेक्षित घटना सधैं थप जटिल छ र किनभने, सरल विकास देखि मौलिक फरक छ।
साथै, यो अवधारणा राम्ररी समाज संग जोडिएको छ: समृद्ध समाजमा व्यक्तिगत जीवन, आफ्नो ontogeny नस मा जाने भने, जन्म र एक dysfunctional वातावरण बसोबास थियो मानिसको देखि मौलिक फरक छ। यस मामला मा दुई व्यक्तिहरूलाई बीच मुख्य फरक बाह्य संकेत र राम्रो-हुँदा र पूर्ण क्षमता निहित प्रकृति महसुस गर्न सक्ने क्षमता छैन पनि हुनेछ। उदाहरणका लागि, यो गर्दा दोस्रो एक छ, कारण पहिलो गरिब गुणस्तर गर्न असफल बराबर अवसर संग एक वैज्ञानिक हुन सक्छ सामाजिक वातावरण। त्यसैले के मानव ontogeny को चरणमा व्यक्तित्व को उपस्थिति द्वारा preceded छ छन् आकार लियो?
ती सबै पर्याप्त लामो सूची, त्यसैले गरेको हरेक भन्न दिनु जीवनको अवधि (बाल्यकाल, वयस्क जीवनको), ontogeny एक चरण दुवै छ। तथापि, प्राय, शोधकर्ताओं सामान्यिकृत अवधि मा मानव जीवन विभाजन को चरणहरु सञ्चालन। यस चरणमा छलफल ontogenesis मानव को अधिक। भ्रूण, किशोर, अवधि, परिपक्वता, प्रजनन र उमेर बढन को चरणमा भेद। सबैभन्दा को सामाजिक पक्षमा महत्वपूर्ण भएको किशोर अवधि छ। के तपाईं कहिल्यै भनेर वर्ण बाल्यकाल मा राखिएको छ सुने गर्नुभएको छ भने, यो कारण बुझ्न गाह्रो छैन।
यो किशोर अवधि समाज संग कुराकानी गर्न व्यक्तिगत क्षमता राखे छ। पछि, तपाईं परिवर्तन गर्न सक्छन्, तर यसलाई थप प्रयास आवश्यक हुनेछ। पहिलो र पछि चरणहरु आफ्नो मूल्य मानव जगतले विकास, शारीरिक जीव रसायन र जैविक पक्ष लागि थप महत्त्वपूर्ण छ रूपमा, ontogeny को मनोवैज्ञानिक क्षण मा यस्तो उच्चारण भूमिका निर्वाह छैन।
त्यसैले, हामीले केही निष्कर्ष आकर्षित गर्न सक्नुहुन्छ: कि ontogenesis छ? जैविक मामलामा, यो प्रक्रिया उच्च गुणवत्ता र कार्यात्मक परिवर्तन यसको अस्तित्व को सबै समय को लागि शरीर undergoes भन्ने छ। मनोवैज्ञानिक र सामाजिक मामलामा, यो प्रक्रिया मोटे एक psychophysiological व्यक्तित्व गठन रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ। हामी, आशा हामी एक बिट स्पष्ट छ कि ontogenesis छ, र तपाईं मानव विकास को सम्बन्ध मा यसको महत्व बारेमा जान्न।
माछा-पत्थर - गहिरो समुद्र भन्दा विषालु बासिन्दा।
महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध संग्रहालय Poklonnaya हिल मा। महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को संग्रहालय
मुख्य कोकेशियान रेज: विवरण, मापदण्ड, चोटहरु
कसरी काम गर्न रिजुम लेख्न: केही सुझावहरू
दबाइ 'Normobakt'। निर्देशन
धुनमा व्यञ्जन: लोकप्रिय व्यञ्जनहरु
उद्यमी व्यवस्थापनको वर्तमान सम्पत्ति
लागि लेंस "मैक्सिम" समाधान - सस्तो र हँसिलो
Abrek - यो हुनुहुन्छ? तिनीहरूले कसलाई कल, र यो शब्द को अर्थ के हो?